Maalin kasta sanduuqgeygu wuxuu ku qulqulaa shirkado SEO ah oo been abuur ah kuwaas oo ka baryaya inay xiriiriyaal ka dhigaan waxyaabaha ku jira. Waa codsiyo aan dhammaad lahayn oo runtii iga careysiiya. Waa tan sida emaylku badanaa u socdo…
Marka hore, waxay had iyo jeer qoraan maqaalka sidii inay isku dayayaan inay i caawiyaan oo ay hagaajiyaan nuxurkeyga markaan ogaado dhab ahaan waxa ay isku dayayaan inay sameeyaan… backlink. Inkasta oo makiinadaha raadinta ay si sax ah u muujinayaan boggagaaga iyada oo ku saleysan waxa ku jira, bogaggaas waxay ku kala saari doonaan tirada la xiriira, boggag tayo sare leh oo ku xira iyaga.
Google waxay hagaajisay algorithms-keeda si ay ula socoto darajada goobaha isku urursaday backlinks la xiriira, domains awood leh. Marka, maya… ku darida xiriiriyeyaasha meel uun kuuma caawin doonaan. Ku kasbashada backlinks bogagga aadka u khuseeya ee awoodda leh ayaa kaa caawin doona. Wax yar oo iska soo horjeedda, ku dirista isku xidhka waxay u badan tahay inay dhaawaceyso awoodaada darajo maadaama sirdoonka Google ay sidoo kale kala sooci karaan wax is daba marinta oo ay kugu ciqaabi karaan.
Markay dadku ii soo gudbiyaan maqaallada, waxaan inta badan arkaa iyagoo adeegsanaya eray-bixinno si xad dhaaf ah u muuqda oo ku dhex jira qoraalkooda barroosinka. Runtii ma aaminsani in algorithms-ka Google ay yihiin kuwo si fudud u fudud oo qoraalka ku xira xiriirkaaga ay yihiin ereyada kaliya ee muhiimka ah. Layaabi maayo haddii Google falanqeeyo waxyaabaha macnaha guud leh ee ku xeeran xiriirka. Uma maleynayo inaad u baahan tahay inaad si cad uga muuqato xiriiriyeyaashaada. Markasta oo aan shaki galo, waxaan kula taliyaa macaamiishayda inay sameeyaan waxa ugu fiican akhristaha. Waa sababta aan u isticmaalo badhamada markaan runtii rabo inaan dadku arko oo dhagsiiyo xiriiriye dibedda ka baxa.
Ha iloobin in calaamadda barroosinka ay labadaba bixiso text iyo sidoo kale a horyaalka xiriirkaaga. Cinwaannadu waa sifo loo adeegsado helitaanka si ay uga caawiyaan akhristayaasha shaashadu inay sharxaan iskuxiraha adeegsadahooda. Si kastaba ha noqotee, daalacashada badankood iyaga ayaa sidoo kale soo bandhiga. SEO gurus kuma raacsana inay qorayaan cinwaanka cinwaanku ay kaa caawin karaan darajadaada ereyada muhiimka ah ee la isticmaalay. Si kastaba ha noqotee, waxaan u maleynayaa inay tahay dhaqan weyn oo waxay ku dareysaa wax yar oo pizazz ah markii qof uu ka xanaajiyo isku xirnaantaada oo caarad la soo bandhigo.
Waa kuwan e-mayl kale oo aan helo maalin kasta. Runtii waan ka jawaabayaa kuwan… oo aan waydiinayaa qofka haddii ay runti iga codsanayaan in aan sumcaddayda khatar geliyo, oo ay dawladda ganaaxdo, oo aan ka baaro matoorada wax raadinta. Waa codsi lagu qoslo. Marka, mararka qaarkood waan ka jawaabaa oo u sheegaa inaan ku farxi lahaa taas… waxay ku kici doontaa iyaga $ 18,942,324.13 halkii backlink. Weli waxaan sugayaa qof si aan lacagta ugu soo diro.
Tani runti waa wax laga xumaado maxaa yeelay macno ahaan waxay iga codsaneysaa inaan sameeyo waxyaabo yar:
Ku xadgudubka Aaminaada Akhristayaasheyda - waxay i weydiinayaan inaan been u sheego dhagaystayaashayda! Dhageystayaal aan la shaqeynayay 15 sano si aan u dhiso kuwa soo socda oo aan kalsooni ku helo. Waa wax aan laga tashan karin. Sidoo kale waa dhab ahaan sababta aad u arki doontid aniga inaan shaaca ka qaado xiriir kasta oo ku saabsan maqaal kasta - hadey tahay xiriir xiriiriye ama saaxiib ganacsi.
Maxay Tahay Sababta Dembiilayaashu Kaliya U Qoraan Faallooyinka
Markii ugu horreysay ee PageRank laga wada hadlay isla markaana boggag internet-ka ah loo wareejiyay goobta, faallayntu waxay ahayd wax caadi ah. Kaliya maahayn goobta dhexe ee lagu wadahadlo (kahor Facebook iyo Twitter), waxay kaloo dhaaftay darajo markii aad buuxisay faahfaahinta qoraaga oo aad ku dartay xiriiriye faallooyinkaaga. Faallooyinka faallooyinka ayaa dhashay (walina waa dhibaato maalmahan). Waqti badan ma qaadan kahor nidaamyada maaraynta waxyaabaha iyo nidaamyada faallooyinka ee lagu aasaasay xiriiriyeyaasha Nofollow ee ku saabsan astaamaha qoraaga faallooyinka iyo faallooyinka
Taasi waxay tiri, dhib kuma qabin meherad aniga ila soo socota oo aan weydiiyo haddii ay qori karaan maqaal qiimo u leh dhagaystayaashayda. Iyo, maahan wax aan caadi ahayn inay jiraan dofollow xiriiri qodobkaas. Waan diiday qoraalo badan maxaa yeelay dadka gudbinaya waxay bixiyaan maqaal naxdin leh gadaal cadna ku dhex leh. Laakiin waxaan daabacaa inbadan oo dheeri ah oo ah maqaallo cajaa'ib leh iyo xiriirka uu qoraagu adeegsaday wuxuu qiimo ugu fadhiyaa akhristayaashayda.
Ma sameeyo wacyigelin… waxaana haystaa ku dhowaad 110,000 xiriiriyeyaal oo dib ugu xirmaya Martech Zone. Waxaan u maleynayaa inay taasi markhaati u tahay tayada qodobbada aan u oggolaado boggan. Waqtigaaga ku bixi daabacaadda waxyaabo cajiib ah… iyo backlinks ayaa raaci doona.
Tags: dib u noqoshodib u xiridbacklinksxiriiriyeyaasha faallooyinkabixintadofollowxiriiriyeyaasha dofollowguddiga ganacsiga ee federaalkaftcraadinta google googleshuruudaha adeegga googlegoogle +kasbashada isku xidhkatayada linkisku xirka dhismahanofollowxiriirinta nofollowdarajaynta raadinta dabiiciga ahxiriiriyeyaasha la bixiyayxiriiriyeyaal tayo lehrelrel dofollowrel nofollowrel kafaala qaadaydib u ugcgurguurto engine engineqiimeynta raadintaxiriiriyeyaal la kafaala qaadayuGCisku xidhka ugcwordpress dofollowwordpress nofollow